Ngwa antivirus maka Mac na-eto eto, mana ha adịghị mkpa | Esi m mac
Ngwa antivirus maka Mac na-eto eto, mana ha adịghị mkpa
N'oge na-adịbeghị anya anyị na-ahụ usoro akụkọ metụtara adware, malware ma ọ bụ ọbụna ụfọdụ nje sitere na Windows gaa sistemụ arụmọrụ macOS, ya mere ngwa kachasị ọhụrụ anyị hụrụ na ụlọ ahịa Mac App nwere njikọ kpọmkwem na antivirus. Ajuju di ebe a doro anya: Ọ dị mkpa iji wụnye ngwa antivirus na Mac?
Ọtụtụ n'ime ndị nọ ya na Mac nọrọ ọtụtụ afọ ma ọ dịbeghị mgbe ha jiri antivirus, ọtụtụ ndị ọzọ oge ụfọdụ nwere ike ịchọ iji antimalware, mana ọtụtụ ndị ọrụ Mac anaghị enwekarị mkpesa banyere nje ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ndị a na-abawanye ụba.
Onwere, isi ndụmọdụ tupu wụnye ihe antivirus ma ọ bụ, na Mac abụghị iji wụnye ya. Ọ bụrụ na kọmputa na-arụ ọrụ nke ọma, anyị enweghị nsogbu slowdown ma ọ bụ na anyị anaghị ahụ ihe ọ bụla nke nkịtị, ọ kachasị mma ịpụ na antivirus. Mgbochi na Mac abaghị uru, ya mere, ọ kacha mma ịme na-enweghị ngwa ndị a.
Dị ka anyị na-ekwu mgbe niile n'okwu ndị a, ọgụgụ isi ma na macOS ma na sistemụ ndị ọzọ ọ bụla bụ ihe ndabere maka anaghị ebute malware, adware ma ọ bụ ihe ndị yiri ya, yabụ kpachara anya na ihe anyị na-ebudata na netwọkụ yana ọkachasị ebe anyị na-ebudata ya site na. Inwe ngwa antivirus na ngwa ngwa Mac na-etinye kwa ụbọchị ma wụnye ha apụtaghị na anyị ga-enwe ntụkwasị obi karịa na Mac anyị, naanị na ndị mmepe mara maka malware ọhụrụ na-agba na netwọkụ ma jiri ọnọdụ a wepụta antivirus ha. , ma anyị na-ekwughachi nke ahụ ihe kacha mma antivirus maka Mac gị bụ onwe gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ngwa antivirus maka Mac na-eto eto, mana ha adịghị mkpa
N'ikwu eziokwu, ọgụgụ isi na-agwa m na ntinye abanyeghị nke ọma. N'etiti ndị ọzọ, n'ihi na ekwenyere m na ọgụgụ isi chọrọ ihe ọmụma na ọ dị mfe onye nwere obere ihe ọmụma metụtara kọmputa ma ọ bụ ụdị / ụdịdị nke ọrịa nwere ike ibute ọrịa, ebe ọ bụ na obere ọgụgụ isi nwere ike itinye n'ọrụ ma ọ bụrụ na ịmaghị oge ị ga - kpachara anya ma ọ bụ tinye uche nkịtị.
Ikwuru eziokwu n'ihe ị na-ekwu, mana "ọgụgụ isi" m chọrọ ịtu aka na isiokwu ahụ bụ nke ịzụrụ ngwa ebe ọ na-egwuri egwu na-enweghị ịga n'ihu na nka kọmputa. O doro anya na onye ọ bụla nwere ike ịrịa nje na kọmputa ha ma ghara ịma ya, mana n'ọtụtụ oge nnweta anyị Mac nke nje ahụ bụ n'ihi nbudata na-akwadoghị, na-ekwenye na "ha ga-enye gị Netflix» ma ọ bụ ihe yiri ya akụkọ anyị na-ahụ kwa ụbọchị. Ọ bụ ya mere m ji ekwu okwu banyere ọgụgụ isi na isiokwu ahụ.
Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta echiche gị serracop
Apple ọ ga-ahụ ọkwa nke Amazon ọhụrụ Echo Show?
Dodocol 7-in-1 hub na USB C njikọ